Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सहकारी संस्थामा विकृति र विसंगति मौलाउँदै – Emountain TV
सहकारी संस्थामा विकृति र विसंगति मौलाउँदै
काठमाडौं, ६ माघ । सरकारले सहकारी संस्थाको नाममा ठगी गर्ने, बढी व्याज लिने र बचत रकम लिएर बेपत्ता हुनेहरु प्रति कडा कारबाही गर्ने प्रावधान गरेपनि ठगीको घटनामा कमी भएको छैन् ।
सहकारी संस्थामा आर्थिक अपचलनको मुद्दा बढ्दै गएपछि कडा नीति अख्तियार गरे पनि ठगीमा कमी नभएको सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।
किसान, मजदुुर वा साना व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरुले मिलेर उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, वितरण गर्ने तथा पुुँजि र श्रम अनुुसार मुुनाफा बाँडिने संस्था हो सहकारी ।
सहकारी संस्थाहरुको मुुलभुुत उद्देश्य आर्थिक उत्थान गरी सामाजिक न्याय र समानता दिलाउनुु हो । तर अहिले सहकारी संस्थामा विकृति तथा विसंगति मौलाइरहेको छ ।
सहकारीहरुले चर्को व्याज लिने तथा उपभोक्ताहरुले जम्मा गरेको पैसा लिएर भाग्ने गरेको कारण आमनागरिक समस्यामा पर्दै आएका छन् । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरुबाट पैसा ठगीको गुुनासो आउने गरेको महानगर अपराध महाशाखाको भनाई छ ।
सहकारी संस्थाहरुले ठगी गरेको पाएमा मुलुकी अपराध ऐन बमोजिम कार्वाहीका लागि नियामक निकायले प्रकृया अघिबढाउन सक्ने सहकारी महासंघको तर्क छ । सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरी गल्ती अनुसारको कार्वाही गरेकोे सहकारी विभागको दावी छ ।
नेपाल भरि ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थाहरु छन् । ती सहकारी संस्थाहरुमा ६३ लाख शेयर सदस्य छन् । सहकारी संस्थाको कुुल सेयर पुुँजी ७३ अर्ब र परिचालित बचत ३ खर्ब २ अर्ब पुुगेको छ ।
सहकारी संस्थाहरुले १६ प्रतिशत व्याज लिनुपर्नेमा २२ प्रतिशतसम्म व्याज लिने गरेको पाइन्छ । सिद्धान्त अनुुरुप सहकारी अघि बढ्न सकेमा गरिबी निवारण तथा दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नमा सहयोग पुग्छ ।